Kutheni ikhefu elibiweyo liphupha: bebibile isikhwama, bafuna ukweba isikhwama
Uthembise ntoni iphupha oye laba inkokhelo? Ukutolika
Iphupha apho umfanekiso wesikhwama ufika kuwe udla ngokuqhagamshelana neendlela ezahlukeneyo zemali. Eyona nto ifanelekileyo amaphupha apho iifolthi zigqithise ngokwenene kwinani lamanqaku okanye unenhlanhla ngokwaneleyo ukufumana le mali ingcebo. Ukuchazwa kwesi siqephu kuqinisekisa ukuba uphupha ukukhula ngokukhawuleza kwenkqubela, ukunyuka kwemali engenayo okanye ukufumana imali. Kodwa yiziphi iinguqu zokulindela ebomini, ukuba ixhasi libiwe ephupheni? Oko iincwadi ezahlukeneyo zephupha zithetha ngale nto zichazwe ngezantsi.
Ziziphi iinguqu ezithembisa iincwadi zephupha, ukuba uphupha ukuba uthathe isikhwama sakho?
Ukuze uchaze ngokuchanekileyo intsingiselo yalolu hlobo lwesimo sengqondo, kuyimfuneko ukuqwalasela ezinye iingongoma. Ngoko, ukuba i-wallet yakho ibanjwe ngumntu ongaziwayo, ngoko ke, ebomini bobubomi, akukho mfuneko ukuba ubole imali yakho okanye nayiphi na impahla (izixhobo, iimpahla, njl njl.). Kukho ukuphakama okuphezulu ukuba okulungileyo kwakho akuyi kubuyiselwa kuwe. Ukongezelela, akufanelekanga ukutyalo-mali kwiiprojekthi ezinobungozi okanye ezingathandabuzekiyo, ukubandakanyeka kwiintengiso eziphathelene neentlawulo zemali. Emva kwephupha elinjalo, amathuba okuba yintlanzi yecrafers yanda kakhulu.
Ukuba isikhwama sebiwe ephupheni, ke esi siqhinga singaba sisixwayiso malunga nengozi ethile yokuhlala kungekho nto ngenxa yokunyaniseka kwabanye abantu. Iphupha apho uqala ukuba inkokhelo ngemali, kodwa emva kwexesha uyifumana okanye uyibuyisele kuthetha ukuba uzakufumana isipho esilinde ixesha elide okanye umvuzo ongalindelekanga. Mhlawumbi mhlawumbi, impumelelo kwimigangatho yabasebenzi, ukukhuthazwa. Mhlawumbi, kungekudala kungekudala inhlanhla yemali iya kuhamba kuyo yonke imisebenzi enxulumene nentengiso.
Ukubamba i-pickpocket ikwajonganisa ukuphuculwa kwentlalontle, inzuzo. Ngeli thuba, unokuthengisa ngokulula ipropati ngexabiso elithengileyo okanye uthenge into exabisekileyo. Ngendlela, akumangalisi ukuba emva kwelo phupha uza kufunda ukuba umntu othembekile kakhulu, ixesha elide likukhohlisile. Kungenzeka ukuba le sihlobo esiseduze okanye nesahlulo sesibini.
Kutheni ndiphupha ngekhredithi ndibi?
Ukuba, ephupheni, wena ngokwakho uba yinto yolwaphulo-mthetho kwaye unqume ukulungelelanisa okulungileyo komnye umntu, ngoko oku kuya kuchazwa ngeendlela ezahlukeneyo. Okokuqala, eli bali likhuluma ngeenjongo zakho: ufuna ngokwenene kwaye indlela elula. Kungenzeka ukuba kungekudala inzuzo yakho unokuyakhohlisa okanye ingena endaweni. Ezinye iinguqulelo zephupha ukutolika zichaza le miphumo, njengenhlanhla ngokukhawuleza, unokukwazi ukufezekisa lula umgomo owufunayo. Kodwa kwakhona, mhlawumbi, kuya kuba ngenxa yobuqili okanye umdlalo wethemba. Ukuba uphupha ukuba okokuqala uthathe isikhwama, waza wagqiba ekubeni ubuyele (ngoko kuthetha, unembeza uxhatshazwa), ngoko lo mfanekiso ubonisa ukuthengwa okunenzuzo kakhulu. Kungenzeka ukuba indawo ekuthengiweyo iya kukunika iingxaki ezininzi kunye neengxaki.
Ingagqitywa ukuba ukuba ubibile isikhwama ephupheni, ngoko ngobomi bokwenene ungalindela iingxaki zemali. Kodwa, ukusukela kwezinye iinguqulelo, kuyacaca ukuba ukuthembela kwethu kunye nobubele kusetyenziswa njengesizathu solu bunzima. Inhlanhla nemali ophuphayo!
Iphupha likajele lisiphi na? Ukutolika kweencwadi ezithandwayo zokuphupha
Elula, kodwa ezinjalo zokupheka ezithabathela kwi-salum: i-saladi, i-steak kunye neentlanzi ezibomvu
Isobho lompompi kunye namazambane kunye ne-leek
Indlela yokuhlobisa indlu yoNyaka omtsha, iingcebiso
Inkwantya ... enhle: ibhinqa kunye ne-sexy-khangela kwi-Halloween 2016
Indoda efanelekileyo kumfazi ophantsi komqondiso weLibra
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017 - Ibhinqa likaCapricorn - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl